United States aghọtaghị n'ezie kọfị nwere ike nụrụ ụtọ dị ka. Ejiri kọfị sie kọfị kọfị maka ogologo oge nke nyere aka ịbawanye uru nke ụlọ ọrụ kọfị. M nwere a enyi m na-arụ ọrụ na a nkwakọ osisi onye na-arụ ọrụ na akụrụngwa jupụta ma kaa akara kọfị containers. Ọ gwara m na ha gbanwere ụdị abalị niile, mana ha agbanweghị agwa. Anyị niile na-eri otu nri, gbanwere dị na kọfị kọfị dị iche iche.
Ihe dị ka oge m malitere ntị ka m kọfị detụrụ bụ banyere oge m hụrụ Norfolk Kọfị & Companylọ Ọrụ Tea. Ruo taa, m ga-agwa gị na ọ nweghị ihe dịka ị nweta agwa a roara n'ọkụ ozugbo na oven.
Ọ bụrụ n ’ị na - eche n’echiche dị ka ikuku ọhụụ, ebe ọgbara ọhụrụ maka kọfị snobs ị ga - ezukọ na hobnob, ịgaghị agakwu eziokwu ahụ. N'ime dị ka ụlọ ọrụ emegburu emegbu… enwere mkpuchi kọfị na ahụekere na ihe niile ịlere anya. Naanị ị gara bata, nye iwu akpa gị, wee pụọ. Amaghị m ebe agwa si, mana ha dị egwu. Ndị nwe ha kụziiri m banyere ndị na-eme kọfị ọhụrụ ndị na-enweghị ọkụ na carafes. Enweghị kọfị gbara ọkụ. Mmmm.
Nghọta na Starbucks mgbe mbụ ha mepere dị ezigbo ụtọ. Comfy oche niile, na-eme ka ọ bụrụ ebe dị mma iji jide nzukọ na-adịghị mma. Oche ndị dị mma kpọrọ ndị mmadụ ka ha nọrọkwuo oge na Starbucks. Agụwo m na ọtụtụ ụlọ ahịa na-etinye oche na oche siri ike ka ndị mmadụ ghara ịnọ ogologo oge. Starbucks gbanwere nnukwu ụlọ ahịa na oche ndị siri ike nwere oche dị jụụ gburugburu.
Jane nwere ike nwee ntutu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-amapu ya ebe ụfọdụ, mana ka ọ na-agbapụ, ị hụrụ ka ọ na-eme nka ya. Ọ ga - akparịta ụka banyere ihe ndị masịrị gị na ihe ndị na-adịghị amasị gị na nhọrọ ọ drinkụ drinkụ ma na - agwa gị di na nwunye ka ọ dabere na ahụmịhe ya bara ụba. Obi ruru gị ala naanị ịnọ ebe ahụ ma na-elebara gị anya. Ọ dị gị ka ọpụrụiche.
Ma ahịrị ahụ toro buru ibu ma usoro mgbakọ ahụ ga-eto nke ọma karị. E webatara igwe ọhụrụ na ala na-akpaghị aka, juru ma wụchaa ogbugba ahụ. Anwansi ahụ apụla… ezughị okè, enweghị agbapụ nke were ogologo oge, dị mkpụmkpụ ma ọ bụ nwee ọtụtụ mgbakwasị. Kasị njọ, baristas tụfuru ihe ha maara banyere nka. Barista abụghị ndị na-ese ihe karịa onye na-atụgharị burger na King Burger.
Eziokwu bụ na amaghị m na m nọrọ n'ezie na Starbucks maka kọfị. Oh - Achọrọ m ndozi m dịka onye ọ bụla ọzọ, mana m hụrụ n'anya n'ụdị, ụdị, ụdị ụlọ kọfị. Enwere m mmasị ịga ebe ahụ n'ihi na enwere m mmetụta dị mkpa. Na mgbe m kwụrụ $ 5 maka ihe ọ drinkụtyụ ọpụrụiche, enwere m mmetụta dị mkpa karị.
Ebe ụfọdụ n'ụzọ, Starbucks malitere ịkpụ ntutu pụrụ iche maka uru na arụmọrụ. Ha kwụsịrị ịme me nwee mmetụta dị mkpa. Ha kwụsịrị ịme me nwee mmetụta pụrụ iche. Ha kwụsịrị ịbụ ndị pụrụ iche. Starbucks bụ akụkọ dị ịtụnanya - ha wulitere ọnụ ahịa ihe ọ drinkụ aụ na-a commonụkarị ma mee ka anyị niile nweta ya. Ma ha enweghị ike ichebe anyị. Uto, uru na arụmọrụ weghaara ma mesịa kpochapụ ihe niile na ụlọ ahịa ndị pụrụ iche.
IMHO, Echere m na Starbucks agbaala agba ikpeazụ ntu ke akpati ozu. Ha abughizi ndi puru iche iji kwụọ gi $ 5 maka ihe ọ drinkụ drinkụ, ugbu a ha na-ebelata otu ngwaahịa kachasịnụ ha touted. Ọ bụ ụbọchị mwute maka Starbucks.
Ana m ede ihe a n'ụlọ kọfị kachasị amasị m n'ụwa, nke bụ ụlọ ahịa nwere nkeonwe. N'abalị a, barista Cassie chịkọtara m soda soda dị egwu maka m dabere na mkparịta ụka banyere ihe ndị na-amasị m na ihe ndị na-adịghị amasị m (na ọ maara nke ọma). Alayna mekwara m sandwich bred achicha mara oke nma na bagel a toasted (obughi na menu).
M dere a dum post na free wireless wee nọdụ akụkụ nke oge na a nnukwu ol 'comfy swivel oche. Cassy na Alayna na ndị ahịa ahụ na-akparịta ụka, site na aha, ma na-agbapụta agbapụ (ma na-eweghachi ha ma ọ bụrụ na ha toro ogologo ma ọ bụ dị mkpụmkpụ), na-akwadebe ha nke ọma dabere na iru mmiri.
Amaara m ihe ị na-ekwu, agbalịrị m starbucks "espresso", n'ihi na echere m na ọ gaghị enwe ụzọ na nnukwu agbụ a maara nke ọma nwere ike bụrụ ihe ọjọọ. Ma ọ bụ. Ma, m na-aga n'ebe mara mma na Sydney, bụ ebe ha na-ata agwa na cafe, marakwa m aha. Ọ dị mma.
Ọgọstụ 12, 2008 na 5:02 ehihie
Abụrụla m Barista ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri. Arụla m ọrụ n’otu n’ime ụlọ ahịa kọfị kacha mma m nwetụrụla, ahụla m ihe na-eme ka ụlọ ahịa kọfị mara mma. M rụrụ ọrụ na Starbucks ihe dị ka ọnwa abụọ n'otu oge okpomọkụ, n'amaghị ihe ọ bụla gbasara ya. I nwere ịhapụ ọrụ ahụ. Nkà ọ bụla m nwetara site n'ahụmahụ m dị ka Baritsa si na windo pụta mgbe m tinyere uwe ahụ. Ọrụ m enweghị ihe jikọrọ ya na kọfị (nke dị egwu na agbanyeghị). M ga-ekwu ihe dị ka 90% nke ọrụ, kwa ụbọchị, nwere ihe jikọrọ ya na iwe iwe na "ịchọ" ọrụ n'aka.
Amaghị m ihe kpatara onye ọ bụla ga-eji gaa Starbucks belụsọ na ha amachaghị nke ọma. Enwere obere ụlọ ahịa kọfị nwere onwe nke nwere otu ihe ahụ n'agbanyeghị. N'ebe m bi, ọ dịghị otu ebe ị ga-esi nweta iko kọfị dị mma.
Enwetara m otu onyinye ahụ site na email wee kwụsị iche echiche ma ọ bụrụ na ọ dịla ndụ m gara Starbucks ugboro abụọ n'otu ụbọchị.
Ọgọstụ 6, 2008 na 12:24 ehihie
Ekwenyere m kpamkpam na nkọwa gị gbasara azụmahịa Starbucks. Ekwenyere m na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'ebe ahụ nwere mmasị na "ahụmahụ" nke Starbucks, ọ bụghị kọfị. Ọ bụ ihe nwute na ha enyefela ọha mmadụ ngwa ngwa na ị ga-aga ebe ọzọ maka ahụmịhe ahụ ugbu a.
Agbalịbeghị m iko agwa agwa, mana ụlọ ọrụ Monon Coffee kwụsịrị na nso nso a. Ana m akwado nke ukwuu ịnye ha ogbunigwe ma ọ bụrụ na ịnọ na mpaghara Broad Ripple.
Ụka Dim Sum
Ọgọstụ 6, 2008 na 12:44 ehihie
Adị m njikere ire mbak m na Starbucks. Echeghị m na ha ga-agbake. Ha nwere ike ịnwe nha nha nha, mana mgbe ha malitere imechi ụlọ ahịa puku ole na ole, ị nwere ike ịhụ afụ agbawala.
N'oge a, m na-asa kọfị nke m n'ụlọ. Ọ dị ọnụ ala ma na-atọ ụtọ.
Ọgọstụ 6, 2008 na 2:40 ehihie
M na-arụbu ọrụ maka Starbucks… Ugbu a, anaghị m aga na ha ọzọ. Ọ ka amasị m ahịhịa kọfị ebe ị nwere ike ịtụ ihe ọ bụla masịrị gị na ndị barista mara ihe ha na-ekwu, dịka ha kwesịrị! Ha nwekwara ikuku ikuku n'efu, ọtụtụ ebe dị mma iji dọba onwe gị, yana ọmarịcha ụlọ ahịa ice cream na-esote. Ọ bụ ọnọdụ mmeri-emeri-emeri.
Ọgọstụ 6, 2008 na 3:33 ehihie
Abụ m onye nwe obere ụlọ ahịa kọfị nọọrọ onwe ya na obere obodo (Dillard, GA). Enwere m ike inye ndị ahịa m nlebara anya ha chọrọ, (ma ọ bụ nzuzo) achọghị m ma ọ bụrụ na ha na-anọ na WiFi ụbọchị niile na otu iko kọfị, m na-edozi iwu pụrụ iche dị ka ha chọrọ, ha na-alọghachikwa. ugboro ugboro! Nnukwu ihe ijuanya, eh? Na azụmahịa a, dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmahịa niile, ọrụ bụ ihe niile!!!!
Ọgọstụ 10, 2008 na 4:50 ehihie
Ị kụrụ ntu dị na igbe ozu Starbuck n'isi. Agakwaghị ụdị mmadụ ebe enwerebu otu. Ọ dịghị ọzọ srevice dị ka ọ dị na mbụ. Kama imepe otu ijeri ụlọ ahịa, ha nwere ike ịkpata nnukwu ego naanị ime ka ụfọdụ n'ime ha buru ibu, yana ndị ọrụ. Ha chere na ha ga-eji kọfị na-eri ahụ 'jikọọ', ma n'ezie gbabara onwe ha n'ime ala na-ewepụ ihe niile mere ha pụrụ iche. Ị chọrọ ndị ahịa? Ha nọ ebe ahụ!! Mana ị ga-enye ihe na-enweghị onye ọzọ nwere, ma ọ dịkarịa ala mee ka ha bụ ndị ahịa kacha mma! Ị ga-eme nke ọma ma ọ bụrụhaala na ị na-agụ manta…. ọrụ bụ ihe niile.
Ọgọstụ 6, 2008 na 6:46 ehihie
Nnukwu akụkọ. Ị n'ezie "kụrụ ntu n'isi"!! Ọ masịrị m ịga n'ụlọ kọfị ndị dị nta nke onwe. Ha na-adịkarị mbara karịa ma na-enye nri ehihie na nri abalị.
Enwere ụlọ ahịa mara mma na Munising, Michigan nke nwere ụlọ ahịa akwụkwọ. Ị na-abanye, nye iwu gị, ma nwee ike ịgagharị na ebe nchekwa akwụkwọ gị ka ị na-eche.
Ọgọstụ 6, 2008 na 9:29 ehihie
M si na omenala ebe ị na-aṅụ kọfị bụ nnukwu ihe, ị na-aga na narị narị ụlọ ahịa kọfị, ịtụ Cappuccino, Espresso ma ọ bụ Macchiato maka ihe na-erughị otu buck, Ana m ekwu kọfị dị mma, ọ dịghị mma shmanzy aha ya bụ ihe ọṅụṅụ na-achọ a. Mmemme Rosetta Stone ịmụta lingo.
N'ebe a na Arizona, Starbucks dị na ụlọ ahịa ọ bụla, ụlọ ahịa nri na ihe ọ bụla nwere ebe a na-adọba ụgbọala. Ahụrụ m onwe m ka m na-akwụsị kwa ụtụtụ maka kọfị toro ogologo yana ndị nne bọọlụ na-eri nri ụtụtụ maka ụmụ ọhụrụ na ụmụ ha.
Kọfị Starbucks enweghị ụtọ na-agbanwe agbanwe, n'eziokwu ọ na-atọ ezigbo ụtọ ọ gwụla ma ị nwetara 5 $ Mocha Cappu? ya na Kamel ihe.
nwere ike ịbụ ya a ahịa atụmatụ atọ ọjọọ dị mfe brewed kọfị nke mere na ị nwere ike nweta nkwalite ka $5 ọṅụṅụ, na na n'agbanyeghị, echefula abụba free toki anụ ezi Sanwichi… ya ọhụrụ.
Douglas, daalụ maka ịkpọte oku
Ọgọstụ 6, 2008 na 9:33 ehihie
Ị mere ka m tinye aka na post gị niile. Edemede mara mma. Ana m arụ ọrụ na imewe webụ maka ụlọ akụ mega, ana m ahụkwa ọtụtụ myirịta mbelata nke ika. Aga m ezigara ndị ọrụ ibe m ihe a.
Ọgọstụ 6, 2008 na 11:26 ehihie
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị mgbe m ga-aga Starbucks n'ihi na abụbeghị m onye na-aṅụ kọfị na gịnị kpatara ịkwụ ụgwọ wifi mgbe ọ bụ n'efu ebe ọzọ?
Ma n'eziokwu m na-eche na nsogbu bụ ọha ahịa. Ndị na-achụ ego na-achọkarị uto na ha anaghị eche maka ntakịrị ihe pụrụ iche ịchọrọ na ụlọ ọrụ ndị ha na-ejide. Ọ bụrụ na ngwaahịa ha abaghị uru karịa S&P, ha na-achụpụ njikwa ma na-ewepụta ndị ọka iwu.
Nsogbu bụ ozugbo ị rutere n'ogo ụfọdụ, ị nweghị ike ịga n'ihu na-eto eto n'otu ọnụego ahụ. Site na oke ahịa 95% kedu ebe ị ga-ahụ uto 10%? Ya mere, njikwa na-amalite igbutu akụkụ, ịkwụ ụgwọ ego, na-enwekwu obi ụtọ na ụzọ ya. Ma nke ahụ bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na onye nchoputa na/ma ọ bụ ndị njikwa na-emeri ethos anọghịzi n'isi (naanị lee Apple n'oge John Sculley ụbọchị.)
Ya mere, n'ezie na ọ bụghị Starbucks na-egbu onwe ya, ọ bụ ọdịdị anụ ọhịa nke ahịa ọha na eze ebe ndị investors na-agba alụkwaghịm kpamkpam site na itinye aka na ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ma na-achọ ka ndị ọzọ, ọzọ, ndị ọzọ.
O zuru ezu ime ka onye isi ike ọchịchị na-achọ ịnọrọ onwe ya.
Ọgọstụ 7, 2008 na 3:15 ehihie
Mike ekwetara. Ihe nkiri dị egwu (nke nwere ihe ndị dị n'etiti etiti mana ọ masịrị m) bụ Corporationlọ ọrụ. Ozi dị mkpa n'azụ ihe nkiri ahụ bụ na ụlọ ọrụ dị ndụ, ihe na-eku ume na-eto naanị na uru. Enweghị ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ na ụlọ ọrụ, naanị uru ma ọ bụ enweghị uru. Nke ahụ bụ ihe na-atụ egwu n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdaba ndị ahịa!
Ekwenyere m na Eric, nke a bụ blọgụ ederede nke ọma ma na-etinye aka nke nwere isi ihe. Ihe m chọrọ ịma banyere ya mere Starbucks ji bilie na mbụ… bụ ndị na-achọsi ike inwe mmetụta pụrụ iche na ha ga-akwụ ụgwọ (ọtụtụ!) Ọ bụghị maka kọfị ụfọdụ, mana maka nlebara anya nke onye na-eme kọfị? Ọ na-amasị gị na ihe ndị na-adịghị amasị gị nke ukwuu nke na ịchọrọ ka e gosipụta ha na kọfị gị? Naanị otu izu ka mụ na nna nwunye m nọrọ n'ụsọ osimiri, ọ na-eme kọfị kacha njọ kwa ụtụtụ (Chock Full o'nuts, gịnị kpatara ị ga-eji kpọọ kọfị nke ahụ?) ụtụtụ ndị ahụ dị jụụ na-akparịta ụka na ya mere kọfị ahụ. nke kacha mma m nwetụrụla. Wepụta oge na ego na ndị enyi na ezinụlọ, ha ga-eme ka ị nwee mmetụta pụrụ iche.
Ọgọstụ 7, 2008 na 3:12 ehihie
Nnukwu nkọwa na ekwenyere m. Enwere akwụkwọ ebe Schultz na-ekwu maka ụlọ kọfị na-aghọ 'ebe nke atọ'. Ọ bụ ebe anyị na ndị enyi anyị na-ezute n'èzí ọrụ na n'èzí ụlọ anyị. Ọ na-abụbu ụlọ mmanya ma ọ bụ ụlọ mmanya ebe ihe a mere, mana Starbucks wepụrụ nke ahụ.
Ahụmahụ m na- ya na ndị enyi na ndị ezinụlọ – mana ọ na-abụkarị n'ebe dị ọkụ na-adịghị n'ebe obibi na-enye mmetụta siri ike. Anyị nọ n'ụlọ anyị na n'ọrụ anyị kwa ụbọchị… anyị chọrọ ebe ọzọ anyị ga-aga. Ruo ogologo oge, ebe ahụ bụ Starbucks.
Ọgọstụ 7, 2008 na 12:12 ehihie
Ma ị maghị otú ọ siri sie ike maka barista nka na-eme nnukwu mgbanwe (n'ihi "akụnụba") site na ụlọ ahịa kọfị nwere mpaghara ebe ọ nwere ike nwee ntutu isi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nsị, na nkà zuru oke na-akpaghị aka, ụlọ ọrụ. -Robot ụwa nke Starbucks… Ọ jọgburu onwe ya.
Ọgọstụ 7, 2008 na 2:39 ehihie
Echere m na mmiri na-agbanwe ma na-atụ anya inwe maestro dị ka ị na-awụpụ m ogbunigwe otu ụbọchị!
Ọgọstụ 7, 2008 na 1:03 ehihie
Hah. Ị bi na Indianapolis. Agaraghị m iko Bean ogologo oge.
Agatụbeghị m starbucks. nwere olile anya ịnwụ n'enweghị ihe ọ beụụ kọfị kọfị $5 1,000 sitere na starbucks.
m na-aṅụ kọfị. nwa. yuban dị ka ọ dị mma nke ukwuu site na ụlọ ahịa nri. na ite site n'ụtụtụ dị mma n'oge ọ bụla n'ehihie mgbe ị na-emegharị ya na ngwa ndakwa nri.
m na-eche echiche inweta onye na-eme kọfị french press. nke ahụ ga-abụ ụbọchị mụ onwe m bụkwa onye snob kọfị.
Ọgọstụ 8, 2008 na 2:47 ehihie
Tinyere ịbụ ọha, ọ bụ akụkụ nke ọgba aghara mmetụ dị elu / teknụzụ dị elu. Ọ bụkwa ihe na-egosi otú ezigbo obodo si emetụta ndị mmadụ. Ndị ahịa anyị na Rubicon chọrọ njikọ na ndụmọdụ yana smarts na usoro mgbe ha na anyị na-arụ ọrụ.
Nke a bụ echiche m banyere obodo - http://tinyurl.com/58skzn
Ọgọstụ 8, 2008 na 2:49 ehihie
Nnukwu Post. Nke a aghọọla otu blọọgụ ọkacha mmasị m ịgụ!
Naanị m na-aga Starbucks mgbe m chefuru ịtọ kọfị kọfị m n'abalị gara aga. Ahịrị ịkwọ ụgbọala dị mfe n'ụtụtụ ọrụ. Otu ihe ị ga-ekwu maka wifi efu bụ na ọ bụghị Starbucks niile nwere ya ọzọ. Agara m wifi gaa n'okporo ụzọ n'izu gara aga ma enwere m ndakpọ olileanya. Ekwenyere m na Starbucks bụ otu n'ime ọtụtụ ụlọ ọrụ na-efunarị ụzọ ha ka ha na-eto ngwa ngwa.
Ọgọstụ 8, 2008 na 4:28 ehihie
Daalụ nke ukwuu, Kyle!
Akụkọ mara mma. Enwere nkuzi dị omimi na nke na-eweda ala na nke a maka azụmaahịa niile na-achọ ịga n'ihu na-eto ngwa ngwa na ngwa ngwa….bara ụba na ụbara ụbara. Ọ bụ ezigbo mkparịta ụka tonite na iko agwa. Amaghị m, na ajụjụ m na ihe Weebụ ga-atụgharị m na ụfọdụ ezigbo ozi. Daalụ.
Hụ ya gburugburu.
Ọgọstụ 10, 2008 na 11:48 ehihie
I kwuru eziokwu. Ọ dịghị mgbe m na-akwado Starbucks na mbụ. Ka ọ na-erule oge mmadụ bịara Terre Haute, ọ bụlarị ụdọ ara ara ahụ. N'ime ị nọ na Terre Haute, kụọ kọfị kọfị ma ọ bụ Java Haute. Ha abụọ ka bụ ndị nwe obodo ma na-eme otu hell nke kọfị na-ezughị okè. N'agbanyeghị, ahụla m azụmahịa nke abụọ ahụ. Ha abụọ na-achọ ịsọ mpi Starbucks na ọkwa ụfọdụ ma anaghị m ata ha ụta. Enwere ego atọ ebe a ugbu a ma eleghị anya ụlọ ahịa kọfị anọ dị na mpaghara. Nke ahụ bụ obere achịcha a ga-apịpịa.
Ọgọstụ 11, 2008 na 11:19 ehihie
Ọ dị ka igwe egwu kachasị amasị gị. Na mbụ, ọ na-amasị gị ịhụ ka ha na-egwu egwu n'ihi na ha na-egwu egwu n'ebe ị nwere ike ịga soro ndị enyi na ihe ọṅụṅụ na-ekpori ndụ ma na-egwu egwu dị egwu. Ọ dị ka ha na-eme ihe ngosi naanị maka gị. Mgbe ahụ, ha na-enwetakwu mgbasa ozi na ị na-enwe obi ụtọ n'ihi na ha nwere vidiyo egwu ma ree ọba ole na ole ọzọ. Mgbe ahụ, ọ na-atọ ụtọ n'ihi na ndị na-emepụta ihe nkiri na-edekọ abụ ha na-egwu nnukwu ámá egwuregwu ebe ụda dị egwu na ebe a na-adọba ụgbọala na-agba ọsọ 5 mile iji gaa ebe mgbakọ ahụ. Ihe niile dị mma na-adịte aka… nwee obi ụtọ mgbe ị nwere ike!
Akụkọ gị dị ebe ahụ. Enweghị Ahụmahụ Starbucks ọzọ, ọ dịghịkwa mgbe m masịrị agwa ọkụ na-amalite.
Yabụ ikekwe nnukwu ụlọ ahịa kọfị mpaghara nwere obi ike ga-emeghe n'otu n'ime ebe Starbucks na-apụ, ma gosi ha otu ekwesịrị isi mee ya!
Ọgọstụ 12, 2008 na 1:41 ehihie
Mụ onwe m hụrụ n'anya "ezigbo ụlọ ahịa kọfị" (Starbucks, ọbụlagodi maka m, erughị eru). A na m ebi n'ọtụtụ… na-enye akwụkwọ ikike azụmaahịa akwụkwọ ikike, kọfị toro n'okpuru. Enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpokọtara onwe gị na nnukwu ụlọ ọrụ, nnukwu kọfị (nke ahụ karịrị ọnụ ahịa ezi uche dị na ya na anaghị emebi oke ọhịa na-akwado ndị na-eto eto), na ikuku… mgbe ị na-anọdụ ala n'oche ochie ma dị mma…
Na US, m na-aṅụ kọfị naanị na Starbucks. ikuku na-amasị m
Ee, ọ dịghị mgbe m nwere mmasị na Starbucks, mana ọ ka mma karịa - ọ bụ ezie na ụlọ ahịa Massachusetts na-adị ka otu ị na-echeta. Kedu ụzọ ọ bụla, echere m na ọ na-enyere aka ịchekwa obere ụlọ ahịa, dị ka adịghị ike dị ka ha na-emekarị.
Ọgọstụ 13, 2008 na 11:54 ehihie
Esi m Washington State, ala nke ụlọ ahịa kọfị 5 n'akụkụ ọ bụla. Ọchịchọ kacha ọhụrụ ha na mpaghara pere mpe bụ ụlọ ahịa kọfị Woods. Ha enwetala ihe ndina mara mma n'akụkụ ebe a na-agba ọkụ na nnukwu mkpokọta egwuregwu bọọlụ. Enwere ndị egwu ndụ na ngwụcha izu na ee ị nwere ike ịrụ ọrụ gị ebe ahụ.
Starbucks adịkwaghị n'elu, ọ dabara adaba karịa. N'oge na-adịghị ezuru ha mma ga-eyi kpamkpam. Agabeghị m Starbucks n'ime ọnwa. Enweghị m ike iguzogide mmanya ha na-egbu egbu na ọbịbịa ha na-asọ oyi. Ọ dịghị onye na-aga n'ezie kọfị… Ha nwere ike ime mma ma ọ bụrụ na ha kwetara na ha na-eme n'ezie swiiti mmanya na iko jupụtara froth.
Echetere m mgbe starbucks malitere na-abịa gburugburu ebe a. E nwere ọtụtụ obere ụlọ ahịa na-akwụsị maka kọfị na Sanwichi, ha chụpụrụ ha n'ahịa.
Starbucks bụ maka ịre ahịa na iji ike emegbu mmadụ. Jụọ onye ọ bụla n'ime ndị bi na New Hope, PA ka ọ dị ha mgbe starbucks niile mapụrụ ụlọ ahịa dị n'ógbè ha iji lekọta ndị njem na ndị ọbịa.
starbucks nwere ihe ịga nke ọma site n'inyere ndị na-achọ ihe dị iche iche, na-etolite site n'inwe mmetụta dị elu na nke pụrụ iche, wee kewaa akpịrị nke ha site n'ikwe ka ihe niile gaa n'isi. Ugbu a ọ bụ naanị nkwupụta ejiji na label mmebe ọzọ.
Naanị lelee ọnụ ọgụgụ nke iPhones ị ga-ahụ na-eji na ebe ahụ, na ọnụ ọgụgụ nke mmebe akpa, na macbooks. Ọ naghị ewe ogologo oge iji chepụta ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-aga ebe ahụ iji gosi na obi dị ha mma. Ọtụtụ agaghị ama espresso ma ọ bụ cappuccino dị mma ma ọ bụrụ na ụfọdụ ndị na-eto eto nwere nkà nwere ntutu isi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-atụba ya n'ihu maka ịbụ ndị na-ewu ewu.
Kedu akụkọ dị mma - ihe ndị na-arụ ọrụ ụlọ ahịa kwesịrị ime ka ndị ọrụ ha gụọ akwụkwọ achọrọ.
Enwetaghị m ụtọ maka Starbucks, na-ahọrọ ịtufu $1.50 maka nnukwu iko kọfị ọkụ ọkụ Panera Bread. Ọzọkwa, Panera anaghị akwụ ụgwọ maka ịntanetị, na-eme ka ụlọ ahịa ha bụrụ ebe kacha mma ịnọrọ.
Panera ọ zuru oke? Mba. Dị ka Starbucks ha na-agabiga ndị ọrụ na mgbanwe njikwa na ọkwa ogo dị iche iche site na ụbọchị ruo ụbọchị.
Echere m na ọ bụ ya mere m ji amasị ịme na ịṅụ kọfị m n'ụlọ.
Doug, nchịkọta mara mma nke m kwenyere na ma onye na-azụ ahịa na onye na-ere ahịa.
Abụọ n'ime ụmụaka m abụrụla nke barista (ọ bụghị na Starbucks) na nke a bụ isiokwu na-ekpo ọkụ nke ndị nọ n'ime ụlọ ọrụ ahụ na-enweghị ike ịghọta. Starbucks (na ụlọ ahịa kọfị niile) kwesịrị ilekwasị anya na ahụmịhe niile. Ma ọ bụghị ya, gịnị kpatara ịkwụ ụgwọ dị elu?
Ọgọstụ 15, 2008 na 4:33 ehihie
M: Oburu SEATTLE STARBUCKS BARISTA
Ezigbo post Doug! … Otu na Seattle. Daalụ na chineke na-enwekarị ụlọ ahịa kọfị “ezigbo” ka mma gburugburu. N'ezie, Starbucks buru ibu ma na-arụsi ọrụ ike mgbe niile, mana ọrụ ha na ịdịmma ha na-adaba.
Ọgọstụ 15, 2008 na 10:37 ehihie
Nyocha dị mma nke otú e si emebi ika ahụ, ekwenyere m, furu efu. Anọ m na-ekiri nke a afọ ole na ole gara aga. Ihe bụbu ahụmahụ mere Starbucks dị iche furu efu ka yinye ahụ na-adịchaghị ege ntị n'ụzọ e si emeso ndị ahịa. Ọ ghọrọ ihe na-abụghị nke onye, ​​​​nkwupụta ya kachasị bụ nke ịkwọ ụgbọala. Ị nwere ike ịnya ụgbọ ala site na MacDonalds wee nweta kọfị. Starbucks abụghịzi “ebe nke atọ.”
Daalụ maka nyocha siri ike.
Ọgọstụ 16, 2008 na 2:38 ehihie
Abụ m onye barista na Starbucks. Arụla m ọrụ ebe ahụ afọ 2 na-agụta… ụbọchị ikpeazụ m bụ Satọde na-abịa. Ọ bụghị naanị na m na-aga ụlọ akwụkwọ, mana m na-arịa ọrịa Starbucks. Enwere m ike ịgafe n'ụlọ ahịa dị n'ebe m ga-aga akwụkwọ, mana enweghị m ọchịchọ ime nke ahụ.
Ahụrụ m ọrụ m n'anya. Ahụrụ m ụlọ ahịa m n'anya. Ahụrụ m Starbucks n'anya. Amalitere m n'ụlọ ahịa ọnụ ụlọ mara mma na Gresham, OR. Ọ bụ nnọọ ọrụ n'aka, ma m ka nwere oge iji mara na ịnụ ụtọ ndị ahịa m, na m ka nwere oge ịmata na ịnụ ụtọ ndị ọrụ ibe m. Ọ bụghị ikwu na onye njikwa m bụ otu n'ime ụdị. Mgbe ahụ, m ga-eme mgbanwe gaa n'ụlọ ahịa dị na Vancouver, WA. Na Vancouver, m na-arụ ọrụ n'ụlọ ahịa ọjọọ nke "na-arụ ọrụ n'ezie mgbe niile" (M na-enweta nke ahụ site n'aka onye ọ bụla nke m na-agwa ụlọ ahịa m na-arụ ọrụ). N'ezie na-arụsi ọrụ ike bụ enweghị nkọwa na anyị bụ ihe atụ nke Starbucks nke ị na-ekwu maka ya n'isiokwu gị, na ezuru m. Enwere nnukwu ụlọ ahịa kọfị mpaghara, ọ na-atọkwa m ụtọ ịgakwuru ha karịa ịga ụlọ ọrụ nke m! Nke ahụ bụ ụbọchị mwute maka Starbucks mgbe ndị ọrụ nke gị anaghị enye gị oge nke ụbọchị.
Maka ịgbachitere m na nke Starbucks baristas ndị ọzọ, anyị na-arụ ọrụ nke ọma na ihe enyere anyị. Ọ bụghị ka m too mpi nke m, mana ka afọ abụọ gachara, abụ m nnukwu barista. M na-eche banyere mmanya m na-eme na ndị ahịa m na-enye ha. M na-ewepụta oge soro ndị ahịa m kparịta ụka wee mata ha mgbe ha nọ na windo mbanye ma ọ bụ na counter m mgbe m nọ na mmanya. Amaara m na ọtụtụ ndị barista ewerewo echiche nke “burger-flipping” wee wepụta ịhụnanya ha maka ọrụ ahụ, mana ọtụtụ emebeghị ma ọ bụ ha na-ejide ihe fọdụrụ na Starbucks ọnụ.
Onwe m, m tụfuru okwukwe na ịhụnanya m nwere maka Starbucks ọ bụghị naanị n'ihi na ụlọ ahịa m bụ ụlọ ahịa na-ere ọkụ, kama n'ihi otú e si emeso anyị dị ka ndị ọrụ. Ma eleghị anya, ọ bụ naanị ụlọ ahịa m, mana ọ dị njọ n'ebe ahụ na n'ihi ya na ụlọ ahịa dị ka ya, Starbucks aghọwo ụgbọ mmiri na-emikpu. M na-arụkwa ọrụ na Red Robin, a na-emesokwa m ya nke ọma n'ebe ahụ. N'ezie ahụrụ m ọrụ m n'anya n'ebe ahụ. Ọ na-amasị m ịga ọrụ na ọ na-eme ka m bụrụ onye ọrụ ka mma n'ihi ya.
Agara m ọzụzụ niile na ịhịa aka n'ahụ Howard Schultz mere n'isi afọ a ma na mbụ a bụ m gung-ho, mana enweela m okwukwe kemgbe m malitekwa ịkwụsị ọrụ m kpamkpam. Edemede gị bụ nke Schultz kwesịrị ịhụ. Mgbe ahụ ikekwe ọ ga-abụ oku ịkpọlite ​​ọ chọrọ.
Ị ma ka ị si agwa onwe gị na ị na-agụ akwụkwọ maka na ị meghere akwụkwọ asambodo gị n'ihu gị? Mana ị na-akụ Stumble On n'ezie ka ịchọta ozi ndị na-atọ ụtọ ịgụ?
Ee, ahụrụ m nke gị wee dee ka m gwa gị na ọ masịrị m nke ukwuu. Enyere m ya isi mkpịsị aka elu, ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee ike ịhụ ya na ịnụ ụtọ ya.
Ị ma ihe tụrụ m n'anya. Lee ka ahịrị Mc Cafe si dị mma. Kọfị Mc Donald maka ihe karịrị $3 iko yiri ntakịrị ihe.
Mgbe m nwachara ya, ọ na-ewute m na m na-aga ebe ahụ karịa ka ọ dị n'oge.